Izindaba - Lapho kusebenza khona ivalvevevemvane?
Amaphayiphu e-Butterfly afanele amapayipi athutha imithombo yezindaba ehlukahlukene ekonakalisayo futhi engonakalisi ezinhlelweni zobunjiniyela njengama-generator, igesi lamalahle, igesi yemvelo, umoya obandayo noshisayo, ukuncibilika kwamakhemikhali nokukhiqizwa kwamandla nokuvikelwa kwemvelo, futhi kusetshenziselwa ukulawula nokunqanda ukugeleza kwaphakathi.
Ama-valve e-Butterfly afanele ukulawulwa kokugeleza. Njengoba ukulahleka kwengcindezi kweveluvane levemvane elisepayipini kukhulu ngokuqhathaniswa, kucishe kuphindwe kathathu kune-valve yesango. Ngakho-ke, lapho kukhethwa ivalvevemvane, ithonya lokulahleka kwengcindezi kohlelo lwamapayipi kufanele licatshangelwe ngokuphelele, futhi namandla epuleti levemvane ukumelana nengcindezi yomshini wepayipi kufanele futhi acatshangelwe lapho evaliwe. Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuthi ucabangele umkhawulo wamazinga okushisa asebenzayo ukuthi impahla yokunwebeka yesihlalo se-valve ingamelana namazinga okushisa aphezulu.
Ubude besakhiwo nokuphakama okuphelele kwe-valve uvemvane kuncane, isivinini sokuvula nokuvala siyashesha, futhi inezici ezinhle zokulawula uketshezi. Umgomo wesakhiwo weveluvane levemvane ulunge kakhulu ekwenziweni kwamavaluva amakhulu. Lapho kudingeka ivelufa levemvane ukulawula ukugeleza, into ebaluleke kakhulu ukukhetha kahle usayizi nohlobo lwe-valve uvemvane ukuze lusebenze kahle nangempumelelo.
Ngokuvamile, ekubambeni, ekulawuleni ukulawula nasendaweni yodaka, ubude besakhiwo buyadingeka ukuthi bube bufushane futhi isivinini sokuvula nokuvala sisheshe. Ngokunqunyulwa kwengcindezi ephansi, kunconywa ivalveveveve.
Endabeni yokulungiswa kwezikhundla ezimbili, ukudlula okunciphisiwe, umsindo ophansi, i-cavitation kanye ne-vaporization, inani elincane lokuvuza emkhathini, kanye nemidiya ehlaselayo, kungasetshenziswa ama-valve amvemvane.
Uma usebenzisa i-butterfly valve ngaphansi kwezimo ezikhethekile njengokulungiswa kwe-throttling, ukubekwa uphawu okuqinile noma ukugqoka okunzima, ukushisa okuphansi nezinye izimo zokusebenza, idizayini ekhethekile ye-eccentric noma i-eccentric ephindwe kathathu enophawu lwensimbi olwenzelwe ngokukhethekile olunedivayisi yokulungisa luyadingeka.
I-line line butterfly valve ilungele amanzi ahlanzekile, indle, amanzi olwandle, amanzi anosawoti, umusi, igesi yemvelo, ukudla, imithi, uwoyela nezimo ezahlukahlukene, isib. 150 ℃, i-Acid-base namanye amapayipi adinga ukubekwa uphawu okuphelele.
Ivaluva le-eccentric butterfly elifakwe uphawu oluthambile lilungele ukuvulwa nokuvalwa kwezindlela ezimbili nokulungiswa kwamapayipi wokungenisa umoya nothuli. Isetshenziswa kabanzi emapayipini egesi nasemizileni yamanzi ekusetshenzisweni kwensimbi, imboni elula, amandla kagesi, kanye nezinhlelo ze-petrochemical.
I-valve yensimbi yensimbi ephindwe kabili eccentric butterfly ilungele ukushisa kwedolobha, umusi, amanzi negesi, uwoyela, i-acid kanye namapayipi e-alkali, njengedivayisi elawulayo nehlangana.
Ngokungeziwe ekusetshenzisweni njenge-valve enkulu ye-swing adsorption (PSA) yokulawula uhlelo lokuhlukanisa igesi, i-valve yensimbi eya ensimbi kathathu eccentric butterfly valve nayo ingasetshenziswa kabanzi ku-petroleum, petrochemical, chemical, metallurgical, amandla kagesi neminye imikhakha. Kuyindlela enhle ye-valve yesango, i-stop valve, njll.
Engagqwali Isango Valve, Engagqwali Ball Valve, I-Angle Globe Valve, I-Valve Yesango Lamanzi, I-Sluice Gate Valve, Trunnion Ibhola Valve,